Izinsizakalo Zethu Zokuqina Zomthetho Womhlaba Wonke Kumaklayenti Wendawo Nakwamanye Amazwe | Izinkampani Zomthetho eDubai
Izinsizakalo Zethu Zokuqina Zokuqina Zomthetho Kwamazwe Ngamazwe Kubathengi Bendawo Nasemazweni Ngamazwe
izindlela ezisebenzayo nezixazululo
Sineqembu labameli abanomdlandla, abanamakhono, futhi abanolwazi olususelwa eDubai nabangaphandle kwezamabhizinisi abalungele ukuphatha udaba lwakho, kwisabelomali esisebenza kuwe ngenkathi uhlinzeka umphathi wakho webhizinisi elisemthethweni.
amanye amazwe esifundeni se-MENA
abameli abafanelekile bamazwe omhlaba
elihle futhi eliyiProfessional law firm
Ngabe ufuna inkampani yezomthetho ehlonishwayo nephrofeshinali enobuchwepheshe bezomthetho, bezomnotho nezamabhizinisi ukukusiza nge-Dubai, Middle East kanye nezomthetho zomhlaba jikelele? Singakusiza!
izinsiza zomthetho ezihlanganisiwe
Siyaqiniseka ukuthi umthetho uhambisana nomnotho. Kungalesi sizathu-ke sidlula nangaphezu kwezinye izinkampani eziningi zomthetho ezizosiza ekuvumelaniseni izidingo zakho zomnotho, zebhizinisi nezomthetho ngosizo lwabameli bethu abasendaweni.
Singakusiza eDubai nasemhlabeni wonke lapho ufuna usizo lwezomthetho. Sinikezela ngezinsizakalo zomthetho ezihlanganisiwe, ukubuyekezwa kwezomthetho, inkuthalo efanelekile, ukwelulekwa kwezomthetho, izinsizakalo zezomthetho zentengiso yangempela, ibhizinisi, kanye nokwazisa ngemakethe e-UAE nakwamanye amazwe esifundeni nakuwo wonke umhlaba.
Noma ngabe ufuna usizo lwezomthetho e-UAE noma ngakolunye uhlangothi lwembulunga yonke: lolo sizo luhlinzekwa ngabameli abafanele bezwe ababandakanyekayo, abanolwazi ngokuphelele ngamasiko nemithetho yabo yendawo, futhi bavame ukuba ngumhumushi oqinisekisiwe osemthethweni ekhaya labo ulimi lwezwe nezinye izilimi.
Inkampani esebenza ngokugcwele yomthetho
Njengensizakalo ephelele, sinikezela ngezinhlobo ezihlukile zamasevisi wezomthetho, kungaba ezentengiso noma ezizimele. Ama-solicitors ahlala ekhona ukuze anikeze izeluleko kanye nokumelwa kwezakhiwo, umndeni, izicelo zokulimala, ukubhenka, ukuxazulula izingxabano, ukumangalelwa kwezentengiselwano, ukuhlukunyezwa, ukuqashwa kanye nezindaba zomthetho wobugebengu. Sigcina ulwazi ngobuchwepheshe besimanje kanye nemikhuba yokusebenza, ukuyisebenzisa ukuqhuba umkhiqizo futhi siqinisekise imiphumela emihle. Thintana nomphathi wezobuchwepheshe wezomthetho wesevisi yakho yonke yezindaba zomthetho obhekene nazo.
Ukuhlinzeka ngezinsizakalo zezoMthetho kuwo wonke Amakhasimende Emhlaba
Singabameli abangochwepheshe e-UAE abazobeka phambili izinsiza zomthetho ezibandakanya konke kanye nezinkontileka ezisalungiswa, sisiza ekwakhiweni kwenkampani nasekuqalisweni kwamabhizinisi eDubai nase-UAE. Sinikeza amakhasimende ethu izinsiza zomthetho ezisukela ekufakweni kwenkampani, umthetho wasebhange, umthetho wezindlu, umthetho wezemisebenzi we-UAE, izinkampani zamahhala, umthetho womndeni kanye nomthetho wobugebengu. Sinikeza usizo nge:
Izinkinga ezinzima ezihlobene nokuhweba e-UAE
Lungiselela ukwakheka kwezinhloso, uhlaka, uxoxisane futhi ubukeze yonke imibhalo ebalulekile nezivumelwano ezihlobene nebhizinisi lakho ngenkathi usiza ekuxazululeni izingxabano ngokuthi ngamakhono okuxoxisana, ukulamula, ukulamula, noma ukumangalelwa ezinkantolo zase-UAE ezinkantolo eziyisikhombisa nase-DIFC.
Amakhasimende, noma ngabe izinhlangano ezizimele noma zenhlangano ezifuna usizo lwezomthetho lapho zibhekene nezimo ezibucayi, kungaba yingxabano elimazayo, ukulahleka kwebhizinisi okukhohlisayo, noma ukunquma inkambo ethile yokwenza.
insiza yamacala okuqala iyatholakala
Imboni yezomthetho eDubai ibilokhu ikhula ngendlela eyisimanga eminyakeni eyishumi eyedlule. Uhulumeni wase-UAE ubelokhu eyingqophamlando futhi esungula nemithetho evumela ukungena nokungenamkhawulo kwezinkampani zemithetho yakwamanye amazwe ezweni.
I-UAE ivelele ekunikezeleni ukufinyelela kwezinsiza zomthetho ezingabizi ezweni lonke. Kukhona igebe phakathi kwezidingo ezingokomthetho zendlu ebanga eliphakathi kanye nenani lezinsizakalo zezomthetho ezingagcwalisa igebe leli. Siyazi ngaleligebe futhi sithatha isinyathelo esihle sokuhlinzeka ngezinsizakalo zezomthetho ezikhethekile zamakhasimende wangasese. Inkonzo yethu yamakhasimende yangasese inakekela izidingo ezihlukile zamakhaya aphakathi nendawo adinga usizo lwabeluleki bezomthetho abangamakhasimende abazimele ngezingxabano zomndeni, ukuhlelwa ngokulandelana, ukuthengiswa kwezakhiwo, nokunye. Insizakalo yethu yokulinganisa okwenziwa kuqala iyatholakala kumakhasimende ezinkampani kanye namakhasimende aphakathi nendawo eDubai nase-UAE.
Ukujwayela okusha, ubuchwepheshe nekusasa lezinsizakalo zezomthetho
The umsebenzi wezomthetho ubulokhu waziwa njengowendabuko, futhi ungathandi ukuguquka, futhi uphikisana nokwenza izinto ezintsha esikhundleni sokuncika ekwanduleleni. Kodwa-ke, yize lokho kuqhathaniswa nezinye izimboni, ukuqanjwa kabusha kwezomthetho akukaze kukhishwe, ubukhulu, ijubane, kanye nokufinyeleleka kwezobuchwepheshe embonini yezomthetho kuye kwaba okubalulekile.
Izinkampani zomthetho namuhla zijwayela indawo yemakethe eholwa ngamakhasimende aqaphela intengo, ubuchwepheshe obungabizi futhi busebenzise kahle kanye nesichibi esikhulayo sabahlinzeki bensiza abangaxhomekeki kunhlobo yendabuko yokulethwa kwezinsiza ekhokhiswa ngehora. Umphumela uba ukuthi ubuchwepheshe obusha kanye nobuchwepheshe buyashintsha ngokushesha indlela okulethwa ngayo izinsizakalo zezomthetho.
Izinkampani zomthetho wendabuko manje zinikeza izinsizakalo zezomthetho ngendlela ehlukile futhi lokhu kudale ukubusa ngentando yeningi embonini futhi kwaletha izindlela ezintsha zokuncintisana kanye nokufuna izindlela ezisebenzayo zokuletha izinsiza zomthetho. Amanye amamodeli amasha wokulethwa kwezinsizakalo zezomthetho amanye amakhasimende ezinkampani azithathile afaka:
1. Khulisa eqenjini lezomthetho langaphakathi ukuze bakwazi ukugcina umsebenzi omningi endlini.
2. Ukuthengwa kwemisebenzi okwandisiwe kusuka kwabanye abahlinzeki bensizakalo abanikezela ngamamodeli wokuphamba ahlukile kumamodeli wendabuko womthetho wendabuko.
3. Sebenzisa izinqubo zobuchwepheshe ukulungisa abantu abafanele imisebenzi efanelekile ukuze uqinisekise ukusebenza kahle, unciphise ubungozi futhi wehlise izindleko.
4. Ukwenqaba izinkolelo zakudala zabameli ukukwazi ukwenza imisebenzi yezomthetho. Le misebenzi ibhekwa njengezinselelo zebhizinisi esikhundleni sokuphakamisa izinkinga zomthetho.
Amafemu aphesheya manje asetshala imali futhi asebenzisa izinguquko futhi azimisele ngokwengeziwe ukusebenzisa ubuchwepheshe obusha obusiza ukulethwa kwensizakalo yabo. Eqinisweni, amafemu amaningi omthetho wamazwe omhlaba namuhla anikele "iminyango Yezokusungula" enomsebenzi wokusesha ubuchwepheshe obusha nokunikeza amasu amasha ngekusasa lenkampani. Izicelo zobuchwepheshe bezomthetho zifaka izindlela zokwandisa ijubane lokuseshwa kwamadokhumenti ukusiza ukubikezela umphumela wamacala, ukuthunyelwa kwamathuluzi okuphatha amaphrojekthi, kanye nesoftware yokuphatha ukuthengiselana okuyinkimbinkimbi kwemingcele ye-M & A. Amafemu amaningi atshala imali kwizinkontileka ezihlakaniphile ukonga izindleko nesikhathi nokuqinisekisa imiphumela engalindeleka futhi engaguquguquki.
Amafemu amaningi abonile ukuthi amakhono amasha namachibi amathalente ayadingeka ukufeza izidingo zamakhasimende ezikhulayo. Abameli be-Tech-savvy bazonikeza inani elithe xaxa enkampanini yezomthetho kunabameli bendabuko. Izinkampani eziningi zomthetho zamazwe omhlaba zibhalisa abahlanganyeli ezifundweni zokufaka amakhodi ukubenza bakwazi ukufunda ukuhambisa izinkontileka kanye nemibhalo esemthethweni.
Kukhona ikhambi kuyo yonke inkinga yezomthetho
Kulula kumakhasimende e-International